Mucaaradka Tanzania oo qaadacay doorasho berri ka dhacaysa dalkaasi – Radio Muqdisho
Mucaaradka Tanzania oo qaadacay doorasho berri ka dhacaysa dalkaasi
Xisbiyadda siyaasadeed ee mucaaradka ah ee ka jira dalka Tanzania ayaa diiday inay ka qeyb galaan doorashooyin hoose oo maalinta birri ah ka dhacaya dalkaas
Madaxda xisbiyada Tanzania ayaa sheegay in sababta ay u diideen inay ka qeyb galaan doorashadda ay tahay kadib markii ogaadeen in dawladu doonayso inay codadka ku shubato.
Warbaahinta dalka Tanzania waxay sheegeen in illaa 6 xisbi suyaasadeed ay diideen inay ka qeyb qalaan doorashadaan oo gogo xaar u ah doorashadda guud ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka dambe ee 2020,ka.
Afhayeen u hadlay xisbiyadda diiday inay doorashadda ka qeyb galaan ayaa dawlada ku eedeeyay inay codadka musuqmaasuqdo oo ay ku shubato.
Doorashadda birri ka bilaabaynaysa dalka Tanzania oo mid hoose ah waxaa lagu laka xulanayaa xildhibaanadda dalkaas waxaana sharaxan in ka badan 300 oo kun oo musharax oo doonaya inay xildhibaano noqdaan.
Golaha Aqalka sare oo anxiyay sharciga Golaha Mihnadlaayasha Caafimaadka Qaranka “SAWIRRO”